Ma Ogtahay inaad Faraxsan Tahay Goorma ... » Martech Zone
Sabtida, Diisambar 27, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo
Waad ogtahay inaad tahay hiliye bulsheed (farxad leh), marka:
Waxaad bilow ama saxiix codsi si loo joojiyo jawaabaha otomaatiga ah ee Twitter… Taas oo aan run ahaantii waxba ka qaban doonin joojinta jawaabaha otomaatiga ah ee Twitter.
Waxaad u maleyneysaa in bixinta shirkadaada blog-ka ay xad gudub ku tahay amarrada qoritaanka.
Waxaad moodaa shirkad ku horumarinaysa dabeecad baraha bulshada si ay ugu suuq geyso wax soo saarkooda waa istiraatiijiyad fashilantay, xitaa marka ay ka dhalanayso iibka oo kordha iyo soo-gaadhistiisa.
Waxaad moodaa baloogyada internetku waa inay ka madhan yihiin xayeysiinta, xiriiriyeyaasha lacagta la bixiyo, ama qoraallada la kafaala qaaday iyo in dadka wax qora ee wax qora ay sameeyaan dhammaan cilmi baaristooda oo ay si qoraal ah ugu qoraan qoraalladooda blogga wanaagga qalbigooda.
(Kahor intaadan u bixin faallo, hubi inaad aqriso qaybta ugu dambeysa ee qoraalkan!)
Waan jeclahay dhoola cadeynta, ha iga helin qalad. Waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo hal maalin - ka dib markaan keydsaday lacag igu filan oo aan ku iibsado dhul buuraha ka mid ah (oo leh Satelite-ka weyn) iyo dhowr meelood oo patchouli ah. Inta udhaxeysa hadda iyo kadib, in kastoo, waxaan ubaahanahay inaan bixiyo biilasha.
Biilashooda waa la siiyaa marka shirkaduhu yeeshaan aragti iyo geesinimo si ay uga faa'iideystaan ​​dhexdhexaadiyeyaasha keena natiijada ROI iyo qanacsanaanta macaamiisha marka loo eego wakhti kasta oo la soo dhaafay. Waan ka caawiyaa inay sidaa sameeyaan, raali gelinna kama bixin doono.
Twitter-ka oo ah Dhexdhexaad Suuqgeyn ah
Guy Kawasaki ayaa u sheegay Robert Scoble in Twitter uu noqon karo aaladda PR ee ugu weyn taariikhda. Twitter waa isbeddelayaa.
Wareysiyadii udambeeyay, aasaasaha Evan Williams wuxuu horey usheegay inuu aad ugu faraxsanyahay fursadaha Twitter oo ah mid suuq geyn ah marka loo eego barnaamujka bulshada. Twitter sidoo kale waxay qaadaysaa talaabooyin ay ku lacag ku hel guusha. Qaado dhoola cadeyn!
Twitter waa a ogolaansho ku saleysan dhexdhexaadinta suuqgeynta. Sidan oo kale, waxay bixisaa a fursad fiican shirkadaha inay suuq gashadaan sida ay u arkaan inay waxtar leeyihiin. Adoo otomaatigya jawaabaha tooska ah adoo adeegsanaya Tweetlater oo aan otomaatig ku dhajiyo qoraalladayda barta Twitterfeed, Waxaan ku kordhiyay tirada macaamiisha boggeyga 5% waxaan kordhiyay aqristayaasha maalinlaha ah (toos uga socda Twitter) 8% celcelis ahaan.
If aad dooro inaad i raacdo, waxaad si dabiici ah ii siineysaa ogolaansho aan kula soo xiriiro. Ha xanaaqin markaan sameeyo. Waxa ugu horreeya ee shirkad kasta ay tahay inay sameyso ayaa ah ka faa'iideyso isgacan qaadashada oo si toos ah uga jawaab leh wax fiican. Hadaadan jeclayn? Ka noqo! Way fududahay.
Dhoolatusyadu waa inay ku sii farxaan, oo aan ka xanaaqin, suuqgeynta warbaahinta bulshada. Soo-baxayaasha iyo suuq-geynta kale ee faro-ku-tiriska ah ayaa ku sii yaraanaya qorrax dhaca. Ugu dambeyntiina, shirkaduhu waxay la qabsanayaan oo ay raadinayaan inay ka helaan oo ay la xiriiraan macaamiisha halka uu macmiilku joogo - maaha inay jiidaan macaamilka oo ay laadayaan oo ay iyaga u qeyliyaan
Suuqgeynta Mashiinka Raadinta ayaa tusaale weyn u ah tan. Blogging Corporate waxay noqoneysaa laylis muhiim u ah shirkadaha, maadaama ay tahay hab aad ufiican oo haynta iyo helitaanka labadaba ah. Macaamiisha waxay ku jiraan makiinadaha raadinta - taasi waa meesha ay shirkaduhu u baahan yihiin!
Markay Shirkaduhu Shaqo Joogaan!
Marka wax walba waad ka aqrisay waana inaad u maleyneysaa inaan ahay doofaar weyn 'ol capitalist taas oo kula talinaysa shirkadaha inay adeegsadaan wax kasta oo dhexdhexaad ah oo ay ku maamuli karaan, ku maareyn karaan, ku maareyn karaan kuna iibin karaan, ku iibin karaan, ku iibin karaan
Waxyaabaha quruxda badan ee ku saabsan warbaahinta bulshada ayaa ah inay ugu dambeyn isku dheelitirto garoonka ciyaarta. Shirkadaha isku daya inay ku xadgudbaan qalabka warbaahintu kaliya ma fashilmi doonaan, way xishoon doonaan. Wax is daba marinta iyo ku xadgudubka Twitter, Blogging iyo Social Media waxay la kulmeen ciqaab xanuun badan oo deg deg ah… hadaan dhamaan laga bixin musiibo.
Taasi waa u fiican tahay qof walba! Dhoolatusyada ayaa lagu daray.
27, 2008 at 9: 02 AM
Hmm .. Waxaan xasuustaa waqti aan sidaa usii fogeyn markii Kawasaki kaliya uu ahaa blogger cusub oo uu soo jeediyay in ay caadi tahay in la is dhiibo. Waa hagaag waa inaan siiyaa xoogaa hadal ah oo afka ah xitaa Dave Winer wuu ila waafaqay midkaas. 🙂
Sikastaba, Merry Christmas Dougy. Hayso mid wanaagsan oo wanaagsan dhammaan qoyskaaga!
27, 2008 at 12: 57 PM
Haye Bloke! Ciid wanaagsan sidoo kale adiga.
Spam ma aha suuq-geyn ogolaansho ku saleysan, in kastoo!
27, 2008 at 3: 15 PM
Jacaylka boostadan! Xaqiiqdii way iga dhigtay LOL.
Markii aan bilaabay inaan ka jawaabo, waxay igu noqotay waxoogaa ka sii fikiraya, markaa runtii waxaan ku dhammaaday dhajinta jawaabta boggeyga: http://www.afhill.com/blog. Xaqiiqdii waxaa jira dhoola cadeyn halkaas ka jirta, oo waxay u badan tahay inay had iyo jeer ahaan doonto. Laakiin inbadan oo naga mid ah waxay ubaahan yihiin inay noqdaan kuwa jilicsan - kuwa aqoonsada labada dhinac ee warbaahinta bulshada: shaqsiyan iyo waliba xirfadle.
28, 2008 at 4: 17 PM
Xaqiiqdii waxaan halkaan uga raacay Andrea halkan oo ku saabsan qoraalkeeda ku saabsan qoraalkaaga (waxaana u maleynayaa inaan tixraaci doono, sidoo kale).
Xaqiiqdii igu tiri (iyo Shabakadeena) banaanka dadka Smippy. Si kastaba ha noqotee, sida qoraalkaagu muujinayo, baloog garaynta si caqli-gal ah iyo bini-aadam dhab ah ayaa mid ka dhigaysa labada Smippy iyo "Smullets" (bogaadintii Andrea) 🙂
Blogging-ka ayaa hubaal ah inay “otomatik” tahay markaad ka gudubto talooyinka (gacanta) ee waxa ay tahay inaad gudbiso. Waxaan u maleynayaa in baloogyada wax yar ii waalaya ay yihiin kuwa gacmaha bini'aadamka kaliya ay ku soo arkeen markii la dhisayay.
Waad sheegi kartaa faraqa 🙂
Si la yaab leh ayaa ku filan, Twitter wuxuu umuuqdaa inuu yahay mowduuc ii muuqda maanta - labadaba emayllada iyo qoraalada. Horena waan u daboolnay, sidoo kale, waana u adeegsannay, laakiin waxay lamid tahay barashada eray cusub always had iyo jeer waxaa jira sabab ay wax mar kale u soo baxaan (sidaa darteed cusboonaysiinta Twitter-ka ayaa habboon, ama adduunku wuxuu umuuqdaa inuu ii sheegayo).
Oh, iyo btw, dib u gurashada buuraha ee ku xirnaanshaha dayax gacmeedka ayaa aniga ii fiican, sidoo kale!
29, 2008 at 1: 08 AM
Waan ku faraxsanahay, Smulets… Tani way iga qoslisaa! Waxaad ka dhigeysaa qodob aad u wanaagsan oo ku saabsan sida dhoola cadeynta loo soo saari doono sababtuna waa inta aan maqlo… .. ka saar wax walba marka laga reebo dulucda. Haddii aad ka rabto taraafikada tweeners, waxaad si fiican u haysataa dawanno iyo fooriyo iyaga xitaa u fiirsada bartaada internetka.
Sikastaba, waxaan ku jiraa kaynta geedaha, waan jeclahay, laakiin wali waxaan hayaa biilal aan bixiyo, sidoo kale. 🙁
29, 2008 at 4: 41 PM
Boostada weyn Doug, SMIPPY! Waan jeclahay
Teknolojiyada waxaa loola jeedaa inay adiga kuu shaqeyso. Sii wad howsha!
Febraayo 4, 2009 saacadu markay tahay 9: 29 AM
Waxaan jeclahay inaan la kulmo qoraal sheeko kicinaya oo aan seegay. Doug, waan ku qanacsanahay hufnaanta aad ku bixiso khibradaada gaarka ah. Waxay kudarineysaa lakabyo kalsoonidaada waxayna siineysaa dadka (aniga oo kale) sheekooyin la taaban karo oo laxiriira.
Hadda waa inaan ku degdegaa oo aan Smippy u adeegsadaa jumlad si aan ugu ballanqaado ereygeyga warbaahinta bulshada muddada dheer. 🙂